Illinois Dispensary License Chikumbiro - Maitiro ekuwana rezinesi yekutengesa
Illinois Yevakuru Shandisa Cannabis Dispensary
Unoda Kuvhura Dispensary?
Illinois disensary rezinesi kunyorera 2020
Illinois Adult Use Dispensary License Zvikumbiro
Illinois Dispensary License Zvikumbiro kufukidza chimwe nechimwe chezvikamu makumi matatu zvevakakomberedzwa nevakuru kushandisa kugovera rezenisi rechisarudzo, asi zadzisa icho chishandiso nekutarisa iyo 30 mapoinzi yakatsikiswa neHurumende yeIllinois kwevanopedza kunyorera basa. Chikwata chako che Illinois vakuru vanoshandisa depensary rezinesi yakakosha nekuda kwezvinhu zvakawandisa zvekukora izvo zvinoda timu yakasiyana, pamwe yakaiswa pamwe chete mukambani yemitezo yakashomeka. Pakupedzisira, uve nechokwadi chekunyorera rezinesi neNdira 2, 2020 uye tariro iwe une rombo rakanaka kuti chikumbiro chako chibvumirwe mari yako yekupanana mbanje muna Chivabvu wa2020. Zvikumbiro zvakaburitswa nenyika yeIllinois muna Gumiguru 1, 2019. Vaviri kutenderera kwemibvunzo kuchatorwa. Zvikumbiro zviri kukodzera pakati paZvita 10, 2019 naNdira 2, 2020.
Illinois Cannabis Dispensary application Chibatanidza
Illinois Cannabis Dispensary Chikumbiro PDF
sei Illinois Dispensary License Zvikumbiro vanonhorwa:
Kukodzera kwevashandi Yekudzidzisa Chirongwa (15 Pfungwa)
Kuchengetedza uye Rekodhi Kuchengeta (65 Points)
Bhizinesi Chirongwa, Vezvemari, Chirongwa Chekushandisa uye Floor Chirongwa (65 Points)
Kuziva uye ruzivo mu cannabis kana ndima dzakabatana (30 Points)
Mamiriro seMugariro Wemagariro Ekuenzana
Basa Revashandi & Zvekushandira (5 mapoinzi)
Illinois Muridzi (5 mapoinzi)
Mamiriro seVeteran (5 mapoinzi)
Kuronga Kwekusiyana (5 mapoinzi)
Mabhonasi maviri mapoinzi pane izvo zvinosungira kuThursti Yebhenefiti Yenharaunda
Verenga magwaro chaiwo emutemo wevakuru wekushandisa dispensary mutemo -> IllInois Adult Shandisa Dispensary Law
Iwe Unowana Sei Iwe Cannabis Dispensary License muIllinois?
A: Iwe une timu yakakura ye cannabis disensary layisheni - iyo inosanganisira kusangana kwemagariro, capital, ruzivo, uye nharaunda - kusanganisa negweta rakanaka uye accountant - uye iwe unoshanda chaizvo nekushandisa mari inotora kuwana cannabis disensary yakagadzirira vhura bhizinesi. Bhajeti inopfuura madhora zviuru zana pamafomu ekunyorera wega. Wobva watarisira kuti iwe unonyatsoshanda, tora mbichana - uye nerombo iwe uchahwina Illinois cannabis depensary rezinesi.
Vangani maIllinois Dispensary License Aripo?
muna 2020 Illinois iri kupa makumi manomwe neshanu cannabis madhipatimendi marezinesi
muna 2021 Illinois iri kupihwa mamwe 110 cannabis disensary marezenisi
iyo yekutanga yekurapa cannabis ma disensaries inogona kuita imwe 110 ye cannabis disensaries.
Zvinopera pasina kutaura izvozvo kunyoreswa zviri pamutemo kwekuvaraidza uye kurapwa mbanje muIllinois pasina kupokana zvichazotungamira mukuwedzera kwekushandiswa kwezvigadzirwa zvembanje. Mukuda kwekuti vatengi vawane kukosha kwemari, uye zvigadzirwa zve cannabis hazvigare mumawoko asiri iwo, iyo nyika yakauya nemirawu yakasiyana yekutonga mbanje mawanendi muIllinois.
Ivo avo vanoda kuendesa zvigadzirwa zve cannabis vanofanirwa kutevera mutemo. Chero ani zvake asingashande zvinoenderana nemutemo anotarisana nemisodzi yakaoma.
Pazasi, tinotarisa iwo ezvinyorwa zvitsva Illinois cannabis dispensary mitemo. Ngatitaridzei mukati, tinodaro?
Illinois Dispensary Vanyoreri Vanofanira Kunzwisisa Yakasiyana Cannabis Ruva
Zvinoenderana nemutemo mutsva weIllinois, makanzura anodikanwa kupa "hutengi hwezvigadzirwa kubva kune dzakasiyana siyana zvebhizinesi rezinesi rezinesi sekuti hesera iripo yekutengeswa chero kunowanikwa kune imwe nzvimbo yekudyara, muchengeti wemhizha, processor, kana infuser anopfuura makumi mana muzana ezvitatu zvakawanikwa zvinotengeswa ”.
Izvi zvinoreva kuti vatengi vanozove vakaringana akasiyana siyana kusarudza kubva mune imwe chete dispensary. Izvo zvinodzikisawo nzvimbo dzekudyara nevamwe varimi kubva pakugadzira yavo disensaries uko kwavanongotengesa zvigadzirwa zvavo. Pane imwecheteyo tsamba, kanzuru inorambidzwawo kuramba kutengesa zvigadzirwa kubva kune varimi kana varimi vanosangana nezvinodiwa zvishoma.
Mashandiro anoita Illinois Cannabis Dispensary License Holders Vanoshanda
Ane marezinesi eCannabis Dispensaries muIllinois haazobvumidzwe kumhanya-kuburikidza nemahwindo kana kupa chero zvigadzirwa zve cannabis mumashini anomiririra. Ivo zvakare vacharambidzwa kupa zvekutakura sevhisi yezvigadzirwa zve cannabis. Makanzuru ese achadikanwa kuve neyekutarisa inoshanda uye poindi yemidziyo yekutengesa. Yese disensary inofanirawo kunge iine vanhu vaviri vanoshanda mumaawa ese ekushanda.
Nepo madhipatimendi anogona kutengesa zvigadzirwa zve cannabis zvakasiyana, ivo havazotenderwa "Kutengesa mabwe kana chero chimwe chinhu chipenyu chirimwa". Uye zvakare, zvese zvigadzirwa zvinotengeswa zvakasiyana, uye kwete kuunganidzwa pamwe chete pamutengo mumwe. Chigadzirwa chega chega "chinofanirwa kuve chakaparadzaniswa zvakasiyana nehuwandu uye mutengo pane irisiti".
Vanongobvumidzwa vane cannabis ma disensaries chete pamutemo vanogona kutengesa cannabis muIllinois.
Chii chaunoda kushanda kune disensary muIllinois?
An Illinois Licensed Cannabis disensary vashandi vanozoda kudzidziswa pamutemo we cannabis uye matanho anoiswa kuti ave nechokwadi chekuchengetedza. Matanho akadai ekudzivirira anosanganisira kuchengetedza mabhuku kwakakodzera, kuchengetedza kudzivirira kuba kwezvinhu zvinogadzirwa ne cannabis, uye chirongwa chinoteedzera zvese mumatura kusvika chatengeswa.
Mutemo unoti sekesheni yega yega inofanirwa kuve nehurongwa hwakakwana uye "hurongwa hwekuchengetedza huchanyatsorondedzera iro rakapihwa netaipi chengetedzo yakazvimiririra pasi peSection 10-5 yeCommission Detector, Private Alarm, Private Security, Fingerprint Vendor, uye Locksmith Act ya2004" ipa chengetedzo kunzvimbo dzinogovaniswa.
Iyo puransary yebhizinesi chirongwa chichava negwaro rakadzama rekuti chitoro chichagadziriswa sei munguva pfupi uye mukufamba kwenguva. "Urongwa hwekushandisa huchasanganisira, mashoma, maitiro akanakisa ekushanda kwemisi nemisi kwemazuva.
The Illinois Adult Use cannabis disensaries ichazodikanwa zvakare kutaura kuti inoronga sei kubata vashandi vayo. Mamwe mapoinzi anozopihwa kune masangano anoronga kupa mazwi ari nani uye inoshanda nzvimbo yevashandi vake vese.
Mirairo anotonga Akapihwa rezinesi Illinois Adult Shandisa Cannabis Dispensary Closures
Makanzuru ese achadikanwa kuzivisa dhipatimendi rezinesi kuitira kuti vasazoda kuvandudza marezinesi avo. Nguva inobvumirwa kucherechedzwa iyi ingangoita mwedzi mitatu pasati yasvika nguva yekuvharwa.
Iwo makanzura achadikanwa kushanda nebazi rezvezinesi kutanga chirongwa chekuvhara. Ichi chirongwa "kero, padiki, kuendeswa kwemabhizimusi marekodhi, kuchinjiswa kwezvigadzirwa zvechi cannabis, uye chero chinhu chipi zvacho chinowanikwa neDhipatimendi".
Mirairo yeIllinois Cannabis Dispensaries Inokanganisa maapplication ayo
Mutemo wenzvimbo, mapurisa, uye dhipatimendi rinopa marezenisi ichave nekodzero yekuita ongorora zvisina kuziviswa pane chero cannabis disensaries mudunhu. Uye zvakare, vashandi vemitemo vanove nekodzero yekuwana zvese zvigadzirwa zvine cannabis zvine chekuita, zvigadzirwa, uye kunyange marekodhi.
Kana paine chero kupomhodza kupi uko gurukota rinofungidzirwa kuti rakatyora mutemo, dhipatimendi rinogona kuferefeta '' mumiriri, ruzivo rwechisarudzo, sangano rinopa vanhu mari, mukuru mukuru, mumiriri wezvemitemo, mutengesi wechitatu, kana chero munhu akabatana naye. nesangano rinogovera ”.
Kurangwa kweIllinois Cannabis Dispensaries yekutadza Kutevera Mutemo
Zvinoenderana nechitsva cheIllinois Cannabis Act, "Dhipatimendi rinogona kuburitsa zvisiri pamutemo kwekutyorwa kudiki". Aya macapital anokwanisa kukwezva faindi isingakwanise kudarika madhora zviuru makumi maviri pakukanganisa kwese. Iyo inochengetwa ichave iri kubhadharwa pamunhu anenge akabata rezenisi. Iye muridzi wezinesi anogona kukumbira kunzwiwa mukati memazuva makumi matatu kubvira pazuva rakabatwa. Kana nguva ino yadarika, kuiswa kwacho kuchave kwekupedzisira uye hakugone kupokana.
Mutemo wacho wakajeka kuti dhipatimendi rinopa marezenisi rinogona, "kuramba kubvisirwa, kuramba kuvandudza kana kudzoreredza, kutsiura, kuisa panzvimbo yekumhan'ara, kumisa, kudzoreredza, kana kutora zvimwe zvinorangwa kana zvisina kunaka." Dzimwe nzira idzo makanzura anogona kutyora mutemo dzinosanganisira:
Kusanzwisiswa kweruzivo rwunotumirwa kudhipatimendi rezinesi
Kuwana rezinesi rembanje kuburikidza nehunyengeri nzira
Iyo nzira inoratidza kusakwana munzira iyo disensary inobata bhizinesi rayo
Kuputsa kwe cannabis chiito uye mitemo
Kuita zvisina hunhu maitiro anogona kukuvadza kune veruzhinji. Chero ani zvake kubva kuruzhinji anogona kuzivisa chero hunhu husina hunhu nema disensary, uye vashandi vemitemo vanoita chikamu chavo kuti vaongorore zvataurwa.
Dhipatimendi rinogona zvakare kusarudza kumisa mashandiro edhisheni. Mushure mekunge chiziviso chakamiswa chakapihwa, muridzi wezinesi anotenderwa kukumbira kunzwa mukati memazuva makumi mana. Kana dhipatimendi risingakudzi chikumbiro ichi, rezinesi rakamiswa rinodzoserwa kana mazuva makumi matanhatu apfuura.
Ndezvipi Zvinodiwa Kuti Utange Rakatenderwa Cannabis Dispensary mu Illinois?
Kunze kwekuwana rezinesi inoshanda, pane zvimwe zvinodiwa izvo izvo avo vanoshuva kutanga madhipatimendi vanofanirwa kuzadzisa. Zvimwe zvezvido izvi ndeizvi:
Vakuru vevakuru vanofanirwa kuratidza kuti ivo vane ruzivo rwezvimwe zvakasiyana zve cannabis zvigadzirwa zvavanoronga kuburitsa
Inofanirwa kunge iine chirongwa chakazara chebhizinesi chinoratidza kuti iyo disensary ichafambiswa zvinoenderana nemutemo.
Vagari vemuzvinzvimbo zvekuenzanirana vanokwira kusvika pamakumi mashanu emakona kana vachikwanisa kuratidza kuti vanosangana nezvinodiwa pachikamu ichi. Ivo vekudyidzana veruzhinji vanonyorerana vanogona zvakare kukodzera kuwana mari kubva kitty yakaiswa parutivi kutsigira cannabis bhizinesi.
Putira pamusoro peMamiriro ezvinhu Vakuru Shandisa Dispensary License Application muIllinois
Hezvo unayo! Kuputswa kwemutemo mutsva weIllinois cannabis dispensary mitemo iyo ichadzora mbanje mawarari anouya muna Ndira 2020. Kunyange iyi mitemo ichiita seyakavimbika, inochengetedza vese vanoita basa rekutengesa mbanje, kusanganisira varidzi vemabhizimusi uye vatengi vembanje.
Kana iwe uchifarira kutanga cannabis disensary, iwe unofanirwa kufunga nezvekutaura kune gweta rine ruzivo kuti ubatsire iwe kunzwisisa mutemo uye kukutungamira mune yako mukuru kushandisa dispensary rezinesi kunyorera.
Illinois Adult Use Dispensary License Chikumbiro
Heino script kubva vhidhiyo & podcast;
Mauya, Ini ndiri Tom - ndiwane na googling Gweta weCannabis, wobva wadzvanya webhusaiti yangu, cannabis indasitiri yemutemo.com. Inowanikwa online pamibvunzo yako yese yekufambisa iyo cannabis indasitiri - senge yanhasi inozivikanwa musoro wenyaya muIllinois - marezinesi matsva. Isu tichave tichivharidzira maficha ayo achagonesa vanosvika mazana mashanu vapinda muIllinois Cannabis kugovera musika mumakore anotevera.
Kubatsira vanhu kuwana ruzivo urwu nezvekuti vangawana sei magariro vanhu vakuru kushandisa kudzidzisa masangano rezenisi (ndiro zita chairo - pasi chikamu 15-25 cheiyo nyowani Illinois Adult Use Law - rova ​​zvinofarira uye unyore. Isu hatisi kuzongofukidza chinyorwa chete, asiwo kuti chinoitwa sei kukwikwidza mikana yako yekusarudzwa. Illinois Yevakuru Shandisa Cannabis Dispensary License.
Ive nechokwadi chekutarisa kusvika kumagumo nekuti ndipo pandichakuudza kuti mangani mabhaisari achavhurirwa bhizinesi muna Ndira 1, 2020. - uye ndedzipi mhando mbiri dzavanadzo.
Uye zvino zvese zvaunofanirwa kuita kuti utore yako yemamiriro ezvinhu vakuru kushandisa disensary rezinesi muIllinois.
Bazi rezvekurima richa - rinofanirwa - inoburitsa kusvika makumi manomwe neshanu marezenisi ekutumira neChishanu 75, 1. Zvakare naZvita 21, 2021, dhipatimendi rekurima richaburitsa mamwe zana nemakumi mapfumbamwe nemashanu marezenisi ekushandisa marezenisi. Mushure meJanuary 110, 1, mamiriro ezvinhu emakanzuru anozove anogarika - asi haakwanise kupfuura mazana mashanu emakanzuru 'mudunhu. Kunze kwekunge kuwanikwa kwakawanda kuchidikanwa. Zvakawanda pane izvo mune mamwe mavhidhiyo.
Saka ngatitaurei nezve izvo chaizvo zvinofanirwa kuenda mune izvo marezinesi kunyorera yekutanga wave yemamiriro ezvinhu vanhu vakuru ma dispensaries.
Kutanga - iwo mutemo unopa kune iyo geographic kupararira kwevanyori. Heino rondedzero yekuti ndiani anotora chii kune yekutanga masaisai - pamwe unogona kuona kunze, kana maviri bloomington anongowana imwe chete apo peoria anowana 3 - isu tangotonhorera kupfuura avo vanishuwarenzi vafambi - uye hongu nzvimbo yeChicago inowana makumi mashanu neshanu.
Kufambisa pasi mutsara pane Chikamu 15-25 - tinouya kune izvo zvinodiwa pakushandisa. Tisati tapfuura izvo - ndapota iva nechokwadi chekuona izvi kuburikidza nemeso ezvekuti maficha achashandiswa sei. Naizvozvo - isu tinotanga neChikamu 15-30 (c) chemutemo we cannabis.
250 mapoinzi achapihwa kune akazara kunyorera - uye ipapo State inotora vanokunda. Iyi ndiyo pfungwa hombe - Kuchengetedza uye Rekodhi Kuchengeta makumi matanhatu nematanhatu. Ndizvozvo zvinopfuura makumi maviri neshanu muzana ezviratidzo zvako zvinouya kubva mukuchengetedza nekuchengetedza rekodhi - uye ndaona mamwe marekodhi evatengi, akadii marekodhi ako - Jeffery? Kune murume anonzi Jeffery akatarisa izvi - ndinovimba ndakakusunungura.
Zvakakosha so Kuchengetedza & Rekodhi kuchengetedza ndeye Bhizinesi Pla, Vezvemari, Vanoshanda uye Floor chirongwa - 65 mapoinzi. Tichave tichiita mavhidhiyo kune vamwe vanopa mabasa aya pane yedu cannabis pamutemo nhau - saka rova ​​bhatani rekunyoresa kuti utarise kune izvo, uye kana iwe uri muindastiri neruzivo rwe idzi pfungwa - inzwa wakasununguka kundishanyira kune indasitiri ye cannabis Gweta uye ndipe foni.
Saka ikozvino nezvinopfuura 50% yezvikamu zvakapihwa Illinois Adult Use Cannabis Dispensary License, tinotendeukira kuchinhu chinonyanya kukosha pane yako application. Nzvimbo Yezvekuenzaniswa Kwemagariro Munyika - Tungamira muvhidhiyo yedu pane iyi kuwa. Iyo yakakosha makumi mashanu mapoinzi. Isu tagara takati cannabis mutambo wenhabvu uye nhengo hombe yechikwata muI Illinois 'pamutemo mbanje musika ndeye munharaunda yakaenzana - 50%
Tevere, isu tinoenda kune 30 mapoinzi eRuzivo uye ruzivo muindasitiri iyi - zvakakosha nekuti mhando yechigadzirwa mudunhu yakavandudza zvakanyanya mumakore maviri apfuura ini ndanga ndine kadhi rangu uye vamwe vanogadzira zvigadzirwa vari kunze uko izvozvi - uye ndinofunga kuti hunyanzvi huri kukura huchaunza zvakawanda - uye pane zvimwe zvinopfuura pakati pehunyanzvi inokura uye ma dispensaries saka tsvaga iyo synergy.
Tisati tasvika kuzvinhu zvakasarudzika, iyo yekupedzisira manhamba maviri manhamba ndiyo Yevashandi Yekudzidzisa Chirongwa - yakakodzera gumi nemashanu mapoinzi. Izvi zvinodikanwa zvakare pasi pekushandisa - uye chimwe chezvikonzero ivo vanozove anodhura kwazvo kuisa pamwechete. Rangarira kudzidzisa vashandi kuti vanzwisise iyo mitemo nemirairo - ndiudze kana iwe uchida rumwe rubatsiro pane izvo zvibodzwa.
Zvakanaka. ngatione - 60 times 2 + 50 + 30 + 15 = 215, ndosaka ndichidaidza asara makumi matatu nematanhatu miscellaneous.
Basa Revashandi & Rekuita - 5 mapoinzi
Kwemagariro Chirongwa - mashanu mapoinzi
Illinois muridzi (51%) - 5 mapoinzi
Veteran akabata 51% - mashanu mapoinzi
Diversity Chirongwa - mashanu mapoinzi uye mazwi mazana maviri nemazana mashanu
Ikoko unoenda mazana maviri nemakumi mashanu - asi maviri mabhonasi mapoinzi anopiwa chirongwa chekuita nenharaunda - 250 max mapoinzi. Ndinovimba unowana ivo vese.
Panzvimbo pekuenda pamusoro pechinhu chimwe nechimwe chezvinhu makumi matatu zveyakagadzirirwa vanhu vakuru kushandisa marezinesi - ndinoda kupedza vhidhiyo iyi pasi pemaminitsi gumi kuti ndigone kuitumira Linked'in uye rugwaro urwu se "chinyorwa" chavanofarira - ipuratifomu yakasarudzika kupfuura youtube - asi kana iwe uchida kunditevera pane yakasanganiswa mufaira yangu yakabatanidzwa mune rondedzero.
Chinhu chimwe chete chisisimo muzvikamu makumi matatu - kero - kana ukachekwa unemwedzi mitanhatu yekupa nyika nekero yako.
Ikozvino mangani makontrakiti achavhurwa naJanuary 1? Pakati pemakumi mashanu nematanhatu negumi neshanu. Iwo makumi mashanu neshanu ekurapwa kwemareshiyo ane mukana wekuti avhure kuti ushandiswe nevanhu vakuru uye kunyange nzvimbo yechipiri. Kutadza kumirira kuti uone nhamba dzauya Ndira.
Rombo rakanaka kune Yako Illinois Cannabis Dispensary License application
Nyorera kuCannabis Legalization Nhau Pano.